Basil Seed (ပင်ပွား) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Basil Seed (ပင်ပွား)
ပင်ပွား (Basil seed) ဆိုတာ
ပင်ပွားရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
ပင်ပွားကို အရသာရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးအနေနဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ ထည့်သွင်းစားသုံးနေတာကြောင့် ပင်ပွားကို သိပြီးဖြစ်နိုင်သလို နာမည်ကိုတောင်မကြားဖူးတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ပင်ပွားမှာ ခန္ဓါကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေပါဝင်နေသလို ပရိုတင်းဓါတ်၊ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊အမျှင်ဓါတ်နဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အကျိုးပြု အဆီဓါတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ ပင်ပွားမှာ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ဆီးချိုရောဂါ ထိန်းသိမ်းရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်သလို အရေပြားအတွက်လည်းကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။ ပင်ပွားကနေရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ သတိထားစရာအချက်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့ဆိုတာက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသိများတဲ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်ဖြစ်တဲ့ ပင်စိမ်းပင်ရဲ့အစေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့ကို အချိုပွဲတွေနဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းတည်ခင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့မှာ ခန္ဓါကိုယ်အကျိုးပြု ဓါတ်ပေါင်းတွေအများအပြားပါဝင်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့တွေထဲမှာ အမျှင်ဓါတ်၊ဗီတာမင်ကေ၊ ပရိုတင်း၊phytochemical၊polyphenolicဒြပ်ပေါင်းတွေ၊orientin၊ vicentin နဲ့အခြားအင်အားပြည့်ဝတဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင် ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့မှာ အိုမီဂါ သရီးဖက်တီးအက်ဆစ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့်alpha-linolenic acid (ALA) လည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ထိုအက်ဆစ်က ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အဆီတွေလောင်ကျွမ်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့မှာ အမျှင်ဓါတ်ပြည့်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အဆာခံနိုင်စေပြီး မလိုအပ်ဘဲ အစားမစားမိအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံလိုမျိုး အာရှနိုင်ငံအချို့မှာ ပင်ပွားစေ့ကိုရေ၊သကြား၊ပျားရည်၊အုန်းနို့ို့နဲ့တွဲဖက်စားသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောက်သုံးမှုကနွေရာသီမှာ အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်စေပြီး ခန္ဓါကိုယ်ကိုအေးမြမှုခံစားရစေပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့က ခန္ဓါကိုယ်အပူချိန်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးသောအစားအသောက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့က အမျိုးအစား-၂ ဆီးချိုဝေဒနာသည်တွေမှာသွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့က ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဗီဝတွင်းဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုကိုနှေးကွေးစေတာကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်အနေနဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကနေ သကြားဓါတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။
၄. ဝမ်းချုပ်တာနဲ့လေပွတာကို သက်သာစေခြင်း
ပင်ပွားစေ့က အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အူသိမ်အူမတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချောမွေ့စေတဲ့ သဘာယပစ္စည်းတစ်မျိုးလို့ သိထားကြပါတယ်။ ပင်ပွားက အစာအိမ်ကိုသန့်စင်စေပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့မှာ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းမှာလေထတာကို သက်သာစေပြီး အစာကျေချက်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ အဆီဓါတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။
၅. အစာအိမ် အချဉ်ပေါက်တာနဲ့ ရင်ပူတာကို သက်သာစေခြင်း
ပင်ပွားစေ့က အစာမကြေတာကြောင့်ရင်ပူတာကို သက်သာစေသလို ဆီးရွှင်စေတာကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ ပူလောင်နေသလိုမျိုးခံစားနေမယ်ဆိုရင် ပင်ပွားစေ့ကိုစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေစိမ်ထားတဲ့ ပင်ပွားစေ့က အစာအိမ်ရဲ့အတွင်းမျက်နှာပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုလျော့ပါးသက်သာစေမှာဖြစ်သလို ရင်ပူတာကိုလည်းသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့ကို အုန်းရည်စိမ်ပြီး အရေပြားပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အနီအပိမ့်တွေထွက်တာလိုမျိုး အရေပြားရောဂါ ခံစားနေရတဲ့နေရာကို ပွတ်လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် သက်သာအောင်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့မှာ အရေပြားဆဲလ် အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ကော်လာဂျင်တစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင် အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ပင်ပွားမှာ သံဓါတ်၊ ဗီတာမင်ကေ နဲ့ ပရိုတင်းတို့လိုမျိုး ဆံပင်သန်စွမ်းပြီး အရှည်မြန်စေဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ ဆံပင်ထူစေပြီး ဆံပင်သန်စေမှုကို တိုးမြှင့်ပေးတဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ သံဓါတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့မှာ ကြွက်သားတွေတောင့်တင်းမှုကိုပြေလျော့စေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတာကြောင့်ချောင်းဆိုးတာကို ထိန်းချုပ်ရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့က ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့မှာပါတဲ့vicenin၊ orientin နဲ့ beta carotene လိုမျိုး ဖလေဗာနွိုက်တွေက ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်အောင်အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့မှာ သံဓါတ်၊ပိုတက်ဆီယမ်၊copper၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်တွေအပါအဝင် သတ္တုဓါတ်တွေက အရိုးတွေကို ကြံ့ခိုင်အောင် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့က အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေပြီး အမြတြမ်းဖျတ်လတ်သွက်လက်နေစေမှာဖြစ် ပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ ပင်ပွားစေ့က ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းက အကျိုးမပြုတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကို ကျဆင်းစေနိုင်တာကြောင့် နှလုံးသွးကြောကျဉ်းတာဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေနိုင်သလိုသွေးကြောတွေထဲမှာ အနှစ်တွေစုပုံတာမျိုးကိုလည်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ပင်ပွားက နှလုံးဝန်ပိတာကိုသက်သာစေသလို ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်တာနဲ့ လေဖြတ်တာမျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
၁၀. စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေခြင်း
စိတ်ကမရပ်မနားတွေးနေတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကလည်းတိုးလာနေပါတယ်။ စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုပြေလျော့စေမယ့် အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကတော့ ပင်ပွားစေ့ဖျော်ရည်သောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့နေ့စဉ်စားသုံးတာက စိတ်ဓါတ်ကျတာကိုလျော့ကျစေဖို့ အထောက်အကူပြုသလို စိတ်ခံစားမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့လည်း အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေးစေတဲ့ ဟော်မုန်းပမာဏကိုလည်းလျော့ကျစေပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့မှာ ဗီတာမင်အေပြည့်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အမြင်အာရုံ အားနည်းတဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဗီတာမင်အေက မျက်ကြည်လွှာအတွက် အင်အားပြည့်ဝတဲ့ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး မျက်စိအတွင်းတိမ်ဖြစ်တာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် အမြင်အာရုံပျက်စီးတာတွေကိုလျော့ပါးသက်သာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းနာကျင်တာ၊ဂေါက်ရောဂါ၊ခေါင်းကိုက်တာတွေခံစားရတဲ့အခါ ပင်ပွားစေ့ကိုစားသုံးပေးတာက နာကျင်ကိုက်ခဲမငကို အလျင်အမြန်လျော့ပါးသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့မှာပါတဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ပါးစေတဲ့ဒြပ်ပေါင်းတွေနဲ့cytokines တို့က နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့မှာပါတဲ့ ဗီတာမင်အေနဲ့အခြားဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေက ခန္ဓါကိုယ်ကoxidative stressတွေကိုလျှော့ချပေးခြင်း နဲ့ နာတာရှည်ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလျော့ချပေးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမျာ အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့က ကိုယ်ခံအားစနစ်အပေါ်မှာ ဝန်ပိတာကိုလျှော့ချပေးနိုင်တာကြောင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ ခံစားရမှုကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပင်ပွားစေ့ကိုနေ့ဏသ်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ခန္ဓါကိုယ်မှာfree radicals များပြားတာကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတွေမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ပွားစေ့က ကျန်းမာရေးအတွက် အတော်လေးကိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုပေမယ့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့လည်းရှိတာကြောင့် သတိထားနိုင်ဖို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟော်မုန်း – ပင်ပွားဆေးရကြဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အက်စထရိုဟော်မုန်းပမာဏကိုပြောင်းလဲစေတာမျိုေးတွရှိပါတယ်။ ပင်ပွားက အမျိုးသမီးတွေကို ရာသီသွေးဆင်းအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိသလိုမွေးလာမယ့် ကလေးငယ်မှာလည်းရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း (သို့) အခြားဟော်မုန်းမမျှတမှုကိုခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့ ပင်ပွားစေ့ကိုမစားသုံးသင့်ပါဘူး။
သီးစေနိုင်ခြင်း – ပင်ပွားစေ့ကိုရေနဲ့အချိုးအစားမျှတစွာရောဟပ်ထားတာမျိုးမ၇ျိဘဲ စားသုံးမယ်ဆိုရင် မျိုချရခက်ခဲတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အစာမျိုချရခက်သူတွေ၊ကလေးငယ်တွေ၊သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအနေနဲ့ ပင်ပွားစေ့ကို မစားသင့်ပါဘူး။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း –ပင်ပွားကဓါတ်မတည့်တာကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့်mint မျိုးရင်းဝင်အပင်တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ဘူးဆိုရင်တော့ ပင်ပွားကိုမစားသင့်ပါဘူး။
ဖျော်ရည်တွေ၊ အုန်းနို့တွေထဲမှာ ထည့်ပြီးစားလိုရပါတယ်။